Plzz...पहिले कमेन्ट गर्नु भन्दा एकचोटी अबस्य पढ्नुहोस कस्तो लाग्छ ? मन छोए शेयर पनि गर्नु होला ! - Buletin Nepal
Plzz…पहिले कमेन्ट गर्नु भन्दा एकचोटी अबस्य पढ्नुहोस कस्तो लाग्छ ? मन छोए शेयर पनि गर्नु होला !
जेठ ६ गते,
नपुगेको रकम पछि तिर्छु, सक्दाे चाँडाे व्यवस्था गर्छु ।अब ला स समाउने मानिस उक्त छाेरीलाई सान्त्वना दिँदै भन्छ, “छाेरी, म यहाँ कसैलाई चिन्दिन, उहाँकाे बारेस चिन्नु थियो । मुख्य कुरा त उहाँले मसँग पैसा माग्नुभएको थिएन, बरू मैले उहाँसँग मागेकाे थिएँ । उहाँ बित्नुभएको थाहा पाएँ र कर्जा फिर्ता गर्दा कसलाई दिने हाे भनी बुझ्न याे नाटक गर्नु पर्यो ।
अकस्मात् प्राप्त भएकाे सम्पतिमाथि धेरैले आँखा गाड्छन, मलाई सही हकदार चिन्नु थियो । लाै राख याे १५ लाख रुपियाँ र मलाई दिएका सबै गहना पनि फिर्ता लेऊ । यसमा हक तिम्रो मात्र छ । वास्तवमा छाेरीकाे माया जीवनकाे साया हाे । छाेरीलाई बचाउने, पढाउने र अघि बढाउने संकल्प गरौँ । जसकाे घरमा छाेरी छिन्, त्याे घर पहिलाे स्वर्ग हाे । सामाजिक संजालमा भेटिएको कथा दर्पण नेपाल डटकम बाट ।
प्रकाशित मिति ६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १५:०४